Pnpkhabar.com | Popular Nepali Portal जनमोर्चा एमसीसीमा सहमत छैन, अब शेरबहादुर देउवाको पनि ओलीको जस्तै हालत हुन्छ : चित्रबहादुर केसी - Pnpkhabar.com
जनमोर्चा एमसीसीमा सहमत छैन, अब शेरबहादुर देउवाको पनि ओलीको जस्तै हालत हुन्छ : चित्रबहादुर केसी
काठमाडौं, ५ पुस : राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले एमसीसी नेपाली जनताले नचाहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले आफूहरु पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल भएको त प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्न भएको उल्लेख गरे । (आज) सोमबार बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली वहस कार्यक्रममा कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले एमसीसी पास गराउनको लागि विगतमा केपी शर्मा ओलीले पनि प्रयास गरेको सुनाए । सोही कुराकानीमा उनले भने–‘पहिले खड्गप्रसाद ओलीले नै हो नि एमसीसी पास गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादको आर्शीवाद लिन खोजेको त । उनी असफल भए त । अब शेरबहादुर देउवाको पनि हालत ओलीको जस्तै हुन्छ ।’ प्रस्तुत छ अध्यक्ष केसीसँगको कुराकानी सम्पादित अंश :-
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी पारित गर्नुपर्यो भनेर भनिरहनुभएको छ अनि तपाईँहरुले किन असहयोग गरेको ?
एमसीसी नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छैन् । यसलाई त राष्ट्रघातीले पो हो त सहयोग गर्ने अनि पास गर्ने, राष्ट्रिय जनमोर्चा त देशभक्ति शक्ति हो नि। साम्राज्यवादको उसले दलाली कहिल्यैपनि गर्दैन् । त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध गर्छ ।
तपाईँहरु पनि सत्ता गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, अनि तपाईँहरुले विरोध गर्दा राम्रो मेसेज गएन नि ?
गठबन्धनमा हुनु भनेको साम्राज्यवादको एजेण्डा बोकेर देशलाई बेच्नको लागि हो र ? गठबन्धनमा सामेल भएको त प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्न हो नि ।
तर, अहिले नेताहरुले पनि एमसीसी भनेको अहिलेको आवश्यकत्ता हो भनिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीदेखि सञ्चारमन्त्रीसम्म एमसीसी पास गर्न ढिलो नगरौं भन्नुभएको छ नि ? अमेरिकालाई चिढ्याउन हुँदैन्, नेपालको विकासमा अमेरिकाको ठूलो हात छ भनेर उहाँहरुले भन्नुभएको छ नि ?
भारतलाई नचिढ्याउँदाखेरि महाकाली सन्धिलगायतका अपर कर्णालीलगायतका देशका जलस्रोत सबै बेचे यी राष्ट्रघातीहरुले, अब अमेरिकी साम्राज्यवादको गुलामी गरेर आफ्नो सत्ता र शक्तिमा बस्नको लागि चाहीँ दलाली गरिराखेका छन् ।
नेपाली जनताले यी दलालहरुलाई चिनिसकेका छन् । त्यसो भएको हुनाले कुनैपनि हालतमा एमसीसी पारित गर्ने कुरा मान्य हुँदैन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी पास गर्ने कुरामा सहमत हुँदैन ।
त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा तपाईँहरु एमसीसी पास गर्न सहयोग गर्नुहुन्न ?
अहिलेको बखतमा मात्रै होईन, भोलिको बखतमा पनि हाम्रो एमसीसीमा सहयोग हुँदैन्।
होईन, प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभयो भने पारित गराउन सहयोग नगर्ने ?
ओहो, प्रधानमन्त्रीले त आाग्रह–महाकाली चाहीँ भारतलाई बुझाए, अपर कर्णाली बुझाए, अरु पनि कति बुझाए, कतिपय जलस्रोतहरु बुझाए, नेपालका प्राकृतिक साधन र स्रोतहरु विदेशीलाई बुझाउने, यहाँको श्रम शक्ति जति सबै अरबको खाँडीमा पुर्‍याउने, यस्तो लाईसेन्स चाहीँ यिनीहरुलाई नेपाली जनताले दिएका होईनन् । हाम्रो गठबन्धन चाहीँ प्रतिगमनको विरुद्धमा लड्न हो । अरु राष्ट्रघाती काम गर्नको लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाले सहयोग र समर्थन गर्दैन् ।
एमसीसी पास गर्नेगरि भोलिको दिनमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा टेबुल गर्नुभयो भने तपाईँहरु के गर्नुहुन्छ ?
हेर्नुपर्यो नि, के गर्छ भनेर ? हेर्नुपर्छ । पहिला त्यहाँ पेश गर्न दिनुपर्छ। पहिले खड्गप्रसाद ओलीले नै हो नि एमसीसी पास गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादको आर्शीवाद लिन खोजेको त । उनी असफल भए त । अब शेरबहादुर देउवाको पनि हालत ओलीको जस्तै हुन्छ ।
तपाईँलाई थाहा छ कि अब एमसीसी पास गराउनको लागि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ ?
प्रचण्डले के भन्छन् ? माधवले के भन्छन् ? शेरबहादुरले के भन्छन् ? कमल थापाले के भन्छन् ? राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपाली जनता र देशको राष्ट्रियता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको सौदावाजी गरेर सत्ता र शक्तिको रजाँई गर्दैन् । अमेरिकी साम्राज्यवादको जुन षड्यन्त्र जोडदार रुपमा बढिरहेको छ, यसबारेमा नेपाली जनताले चनाखो भएर हेरेका छन् । एमसीसीको बारेमा जनमोर्चाले सडक र सदनमा विरोध गर्छ ।
होईन, एमसीसीबारे अध्ययन गर्नको लागि कार्यदल गठन भएको छ, यसले पनि पास गराउन आग्रह गर्ला ? त्यतिबेला तपाईँहरुले के गर्ने ?
गर्ला, पहिला पनि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा नेकपामा कार्यदल गठन गरेको थियो । त्यो कार्यदलले पनि कतिपय कुरा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको थियो । त्यो त अमेरिकीहरुलाई मान्य छैन । एमसीसी संशोधन गरेर अघि बढाउन अमेरिकीलाई मान्य छैन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो कार्यदलको औचित्य नै छैन् । जनतालाई झुक्याउन, भुलाउन यदि कसैले षड्यन्त्र गर्छ भने नेपाली जनताबाट उसले माफी पाउँदैन् ।
होईन, तपाईँहरु सधैं किन विरोध गर्नुहुन्छ ?
त्यो कार्यदलले यो एमसीसी नेपाल र नेपालीहरुको हितमा छैन, यो चाहीँ खारेज हुनुपर्छ, यसलाई स्विकार गर्नुहुन्न, एमसीसीका मतियारहरुलाई नेपाली जनताले कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन दिनुपर्छ । त्यो मान्य हुन्छ । र, कुनैपनि बहानामा र कुनैपनि हालतमा यो नाटक गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादको पासो नेपाली जनताको घाँटीमा बेर्न पाईँदैन् ।
एमालेले एमसीसी पास गराउन सघाउने र ओली र देउवा मिलेर अबको निर्वाचन गराउनेसम्मको कुरा पनि आएको छ नि ?
अब ती कल्पनाको कुरा हुन् । अर्को साल स्थानीय तहको निर्वाचन र आम निर्वाचन नभएको भए यिनले पास गरिसक्दथे । अब चुनाव नजिकिँदै गरेकोले यिनीहरुलाई पास गराउनको लागि महाभारत छ । अमेरिकालाई देखाउन चाहीँ अलि अलि नाटक चाहीँ गर्न सक्छन् । नेपाली जनताको लागि कुनैपनि हालतमा एमसीसी मान्य छैन् । यसलाई खारेज गर्नुपर्छ ।
तपाईँ एमसीसी पनि खारेज गर्ने पक्षमा, अनि संघीयता पनि खारेज गर्ने पक्षमा, जहिल्यैपनि तपाईँ किन यस्तो विरोध गर्नुहुन्छ ? संविधानमा जनताले पाएको हक र अधिकार कुण्ठित गर्ने अवस्थामा पुग्नुभयो ?
संघीयताले त देश टाट पल्टायो । ८७ जना त मन्त्री मात्रै भए प्रदेशमा । खरबौं खरबौं ऋण विदेशबाट काढेर मन्त्री पाल्ने काम भयो ? संघीयताले चाहीँ यति छिटो नै आफ्नो कुरुपता देखायो । संघीयता त धराशयी भैसक्यो । पहिलो शर्त त संघीयता त खारेजी हुनुपर्छ ।
दोस्रो कुरा एमसीसी पनि खारेज गर्नुपर्छ । संघीयताबारे नेपाली जनताले थाहा पाईसकेका छन् । नेपाली जनतालाई संघीयता र एमसीसी दुवै मान्य छैन् । हाम्रो पार्टी एमसीसीको पक्षमा कुनैपनि हालतमा छैन् । जीत नेपाली जनताको हुन्छ ।